Daawo Nin Cuntooyinka Safaariga Loo Yaqaan ee Qofka Halku Joogo Loogu Geeyo Kurka Sare Ee Hilibka Suugada Ka Sii Cuni Jiray Inta aanu Gaadhsiin Qofkii Loo Waday oo Muqaal Sir Ah oo Laga Duubay Buuq Ka Dhaliyey Baraha Bulshada Iyo Talaabada Laga Qaaday VEDEO
Wednesday December 12, 2018 - 15:21:15 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by Super Admin
Daawo Nin Cuntooyinka Safaariga Loo Yaqaan ee Qofka Halku Joogo Loogu Geeyo Kurka Sare Ee Hilibka Suugada Ka Sii Cuni Jiray Inta aanu Gaadhsiin Qofkii Loo Waday oo Muqaal Sir Ah oo Laga Duubay Buuq Ka Dhaliyey Baraha Bulshada Iyo Talaabada Laga Qaada
Waxaa shaqada laga eryay nin ka shaqeeya shirkad qaabilsan dalabaadka cuntooyinka ee macaamiisha guryaha loogu geeyo, kadib markii aad loo faafiyay isaga oo cunaya cunto baakadeysan oo uu geeynayay, kadibna uu dib u daboolay hambadii cuntada.
Markii hore dadka isticmaala baraha bulshada ayaa muuqaalka ku tilmaamay mid yaqyaqsi leh, islamarkaasna muujinaya anshaxa xumo.
Balse markii shirkaddii ay ceeyrisay ninkii ayuu markaliya dareenka dadka is badalay, waxayna u muujiyeen sida ay uga xunyihiin xaaladiisa.
Dadka ayaa waxa ay sheegeen in shaqaalaha ay saacado badan shaqeeyaan, mushaarkooda uu yaryahay, islamarkaasna laga yaabo in ay baahi u geysay.
Shaqo la'aan ba'an ayaa ka jirta Hindiya, iyada oo sannad kasta ay suuqa shaqada kusoo biiraan 8 milyan oo qof oo cusub oo shaqo doon ah.
Shirkadda Samato ayaa sheegtay in ay u shaqeeyaan illaa 15 kun oo qof.